Wararka Maanta: Axad, Jun 24, 2012-Hay'adda samafalka ee NRC oo Caalamka ugu baaqday inay kordhiyaan gargaarka ay siinayaan Soomaaliya
Xagaagii lasoo dhaafay kumannaan caruur ah ayaa u dhintay abaaro ka dhashay cunno yaraan, iyadoo colaadaha ka jira Soomaaliya ay sababeen in hay'adaha gargaarku ay tegi waayaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka caawinaadda u baahan.
Kumannaan carruur ah iyo qoysaskooda ayaa ka barakacaya goobaha ay colaaduhu ka jiraan, kuwaasoo gaaraya xeryaha qoxootiga Dhadhaab, iyadoo laga dayrinayo xaaladda ammaan ee xeryahaas.
Hay'adda NRC waxay sheegtay inay gacan ka geysanayso sidii ay u gargaari lahayd caruurtaas, iyadoo dunidana ku wargelisay inay kordhiyaan gargaarka ay siinayaan caruurtaas.
Dalka Soomaaliya ayaa waxaa sannadkii hore ka dhacay abaaro daran oo sababay inay dad aad u fara badan kasoo barakacaan deegannadooda, kuwaasoo qaarkood gaaraya xeyaha qoxootiga ee dalalka Kenya iyo Itoobiya, halka kuwo kale oo fara badanna ay soo gaareen Muqdisho.
Hadalka hay'adda NRC ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay hay'adaha gargaarku ay daboolka ka qaadeen in xeryaha qoxootiga Dhadhaab ay yihiin kuwo aysan dadka qoxootiga ah ku noolaan karin marka la eego dhinaca ammaanka.